गाउँ गाउँमा दलहरु सक्रिय, स्थानीय नेताहरु पार्टी परिवर्तनमा व्यस्त ! | Nepal Ghatana
गाउँ गाउँमा दलहरु सक्रिय, स्थानीय नेताहरु पार्टी परिवर्तनमा व्यस्त !
प्रकाशित : १९ चैत्र २०७८, शनिबार २२:०४
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशभर राजनीतिक दलहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरुले पार्टी प्रवेशदेखि वडा–वडामा प्रचार–प्रसार कार्यालय स्थापना गरेका छन् । केन्द्रीयस्तरका नेतालाई बोलाउने र राजनीतिक प्रभाव तयार गर्ने कार्यक्रमले पनि जिल्लामा चुनावी माहोल तातेको स्पष्ट हुन्छ ।
तराईमा गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले पर्साका ग्रामिण भेगमा संगठन विस्तार गर्दै पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई जोड दिइरहेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न नेता, कार्यकर्ताहरुलाई काठमाडौंसम्म पु¥याएर पनि पार्टी प्रवेश गराईरहेको छ । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि जिल्लामा चुनावी गतिविधि बढाउँदै छन् । राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई लक्षित गरी पार्टी प्रवेश, प्रशिक्षण, संगठन बिस्तारका कार्यक्रम गरीरहेका छन् ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहाना राख्नेहरु पनि व्यक्तिव्यक्तिसँगको भेटघाटमा व्यस्त देखिन्छन् । जिल्लामा एक महानगरपालिका, ३ नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका गरि १४ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । पर्सामा हालसम्म सत्तागठबन्धन मध्येको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बाहेकका सबै पार्टीका अध्यक्ष र शिर्ष नेताहरु आईसकेका छन् ।
चैत १० गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले वीरगञ्ज पुगेर नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिदैँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित्ने गरी खट्न निर्देशन नै दिए । यस्तै चैत ७ मा मधेस आन्दोलनका चर्चित नेता राजेशमान सिंह जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरे ।
गत २६ फागुनमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पर्साको पोखरीया नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रौनियारलाई कांग्रेसमा प्रवेश गराए । रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट मेयर बनेका रौनियार आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकटका लागि नै कांग्रेस प्रवेश गरेको चर्चा छ ।
त्यसैगरी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजय सरावगी नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरे । वीरगञ्ज महानगरप्रमुख सरावगीले एमाले अध्यक्ष ओलीले लिपुलेकलाई नेपाली नक्सामा हालेर नेपालको राष्ट्रियताको पहिचान स्थापित गराएकाले आफू त्यसबाट प्रेरित भएर एमाले रोजेको बताउँछन् ।
त्यसैगरी, चैत ९ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शिव पटेल एमाले प्रवेश गरे । मधेसवादी दलकै लोकप्रिय नेतालाई भित्र्याएर उम्मेदवार बनाउँदा एमालेलाई ‘मधेस मुद्दा’ समेत आफंैसँग रहेको दर्शाउन सहज हुने तर्क स्थानीय नेताहरुको छ ।
पाँच वर्षअघि ‘एमाले हौं’ भनेर खुलेर हिँड्न नसक्ने पर्सामा आज मधेस आन्दोलनको अग्रभागमा रहेका नेताहरु नै एमाले प्रवेशका लागि तछाडमछाड गरिरहेका छन् । स्थानीय जानकारहरूका अनुसार यसपटक वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमाले, कांग्रेस र जसपाकैबीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
पर्साको स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएका चारजना जनप्रतिनिधिहरुले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडिसकेका छन् । जिल्लाको एक महानगरपालिका, एक नगरपालिकाका नगरप्रमुख र दुई गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आफू निर्वाचित भएको पार्टी छाडेका हुन् ।